Ɔwɛn-Aban | February 2008
KENKAN WƆ Albanian Amharic Arabic Armenian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kazakh Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tatar Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese
Ná ogu po a ɛwɔ Salomo asɔrefie no kɛse te dɛn?
Asɛm a ɛwɔ 1 Ahene 7:26 no ka sɛ nsu “bat mpennu” na na ɛwɔ ɛpo no mu a na asɔfo no de hohoro wɔn nsa ho, nanso asɔredan no ho asɛm foforo a ɛwɔ 2 Beresosɛm 4:5 ka sɛ na nsu “twahina mpensa” na ɛwɔ ogu po no mu. Esiane sɛ nsonsonoe wɔ nsɛm abien yi mu nti, ama ebinom ka sɛ onii a ɔkyerɛw Beresosɛm nhoma no dii mfomso.
Nanso, New World Translation Bible no boa yɛn ma yehu nea enti a nsɛm abien no nyinaa yɛ nokware. Ahene nhoma a edi kan 7:26 ka wɔ hɔ sɛ: “Bat susuhina mpem abien na wɔde gu mu.” Hyɛ no nsow sɛ 2 Beresosɛm 4:5 ka sɛ: “Bat susuhina mpem abiɛsa na etumi fa.” Enti 2 Beresosɛm 4:5 kyerɛ nsu dodow a aguasɛn a ɛwɔ asɔrefie hɔ no tumi fa, bere a 1 Ahene 7:26 no kyerɛ nsu dodow a na wɔtaa de gu aguasɛn a ɛwɔ asɔrefie hɔ no mu. Sɛ yɛbɛka no ɔkwan foforo so a, na wɔmfa nsu ngu mu ma ɛnyɛ mã tɔ. Ɛte sɛ nea na wɔde nsu bat mpennu na ɛtaa gu mu.
Dɛn nti na Yesu ne Petro de dwetɛ sika biako pɛ tuaa asɔrefie tow no?
Wɔ Yesu bere so no, na ɛsɛ sɛ Yudani barima biara a wadi boro mfe 20 tua afe afe asɔrefie tow a ɛyɛ nnwetɛbona abien anaa didrachma no. Ná eyi yɛ bɛyɛ ɔpaani nnanu akatua. Bere a towtua ho asɛm sɔree no, Yesu ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Kɔ po kɔtow darewa na apataa a edi kan a wubeyi no, sɛ wubue n’anom a wubehu dwetɛ sika. Yi ma wɔn fa tua me ne wo de.”—Mateo 17:24-27.
Nhomanimfo pii gye di sɛ dwetɛ sika a wɔka ho asɛm wɔ ha yi yɛ tetradrachma. Ná sika yi yɛ nnwetɛbona anan a ɛbom biako, anaa sika a nnipa baanu betumi de atua wɔn asɔrefie tow. Ná tetradrachma no ho nyɛ na te sɛ didrachma no. Enti The New Bible Dictionary ka sɛ: “Ɛte sɛ nea na Yudafo baanu baanu taa bom tua wɔn Asɔrefie tow.”
Bio nso, sɛ na obi pɛ sɛ ɔsesa sika de tua onipa biako pɛ tow a, na wogye no sika bi. Ná wotumi gye no sika a ɔbɛsesa no mu ɔha mu nkyem 8. Nanso sɛ na nnipa baanu bom tua tow no a, na wonnye wɔn sika biara. Enti wɔ nsɛm kakra yi mu mpo no, asɛm a Mateo kyerɛwee no foa nea na wɔtaa yɛ wɔ Yesu bere so no so.
[Mfonini wɔ kratafa 15]
Tetradrachma A Wɔayɛ No Kɛse
w08 2/1 kr. 15
Nkurɔfo Repɛ Mmuae
Ɛyɛɛ Dɛn na Yɛbae?
Dɛn Nti na Yɛte Ase?
Dɛn na Ɛbɛba Daakye?
Oguanhwɛfo a Odwen Wo Ho
Dɛn Nti Na Ɛsɛ Sɛ Yɛbɔ Mpae Wɔ Yesu Din Mu?
Fa Nokware Nyankopɔn no Ho
NEA ƐMA ABUSUA NYA ANIGYE Sɛnea Wosiesie Akasakasa
Wɔresisi Adan De Ayi Yehowa Ayɛ
MOMFA NKYERƐKYERƐ MO MMA Marko Ampa Abaw
Sɛnea Ɔbaatan Betumi Anya Akomatɔyam
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN February 2008
Share Share ƆWƐN-ABAN February 2008
ƆWƐN-ABAN February 2008